पत्रकार बने नगरप्रमुख- देश - कान्तिपुर समाचार
पत्रकार बने नगरप्रमुख
सञ्चारकर्मी सल्मा खातुन पर्साको पोखरिया नगरपालिकाको उपमेयर
आश्विन ८, २०७४ रवीन्द्र उप्रेती, शंकर आचार्य
महोत्तरी/पर्सा — उनी कलम र क्यामेरा च्यापेर नेता र मन्त्रीको पछि लाग्थे । घटनास्थल पुग्थे । समाचार संकलन, लेखन र सम्प्रेषणमा दिनरात बिताउँथे । हेर्दाहेर्दै दिनचर्या फेरिएको छ ।
हिजोका श्रमजीवी पत्रकार अहिले आफंै सञ्चारकर्मीले घेरिएका छन् । अरूसँग प्रश्न र जिज्ञासा होइन, आफैं त्यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन उनलाई भ्याइनभ्याई छ ।
कलमजीवीबाट राजनीतिको यात्रामा कदम बढाएका नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद मण्डल भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मटिहानी नगरपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी भएपछि अहिले उनको भूमिका फेरिएको हो ।
निर्वाचन जितेपछि विजय यात्रामा व्यस्त मण्डलले पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आउने आफू एक्लो नभएको स्मरण गराए । ‘पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने म एक्लो हैन,’ उनले भने,‘कुनै बेला किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) पनि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो ।’
मटिहानीका मतदाताले नगरको विकास र समुन्नतिका लागि मत दिए पनि मण्डलसँग राजनीतिभन्दा पत्रकारिताको अनुभव बढी छ । ०४९ मा स्थानीय ‘तथ्य’ साप्ताहिकबाट पत्रकारितामा प्रवेश गरेका उनले ०५२ देखि एक दशक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि जिल्ला संवाददाताका रूपमा काम गरे । ०५६ देखि उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म उनी एनटीभीको जिल्ला संवाददाता थिए । उनले ०६२ देखि लगातार ३ कार्यकाल पत्रकार महासंघको जिल्ला नेतृत्व सम्हाले । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ३ वर्ष सदस्य रहे । त्यसअघि ०६३ मा प्रेस काउन्सिलको सदस्यको जिम्मेवारी पनि उनले सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।
उनका आलोचक पत्रकारितामा डोरिएको व्यक्तिले नगर हाँक्न सक्नेमा शंका गर्छन् । तर, उनी भने पत्रकारिता र राजनीतिमा खासै फरक देख्दैनन् । त्यसैले मतदाताले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्न समस्या नहुने बताउँछन् । पत्रकारिताको अढाई दशक लामो अनुभवलाई नगरको विकासमा रूपान्तरण गर्न आफूले राजनीतिको भर्‍याङ टेकेको बताए ।
‘पत्रकारिता र राजनीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एक–अर्काका पूरक हुन् भन्ने मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘पत्रकारिताबाट संगालेको २५ वर्ष लामो अनुभवलाई अब नगरको विकासमा लगाउने
अठोटका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरें, जनताले पनि विश्वास गरे ।’
ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक नगर मटिहानीको विकासका लागि ३ ‘स’ अर्थात सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने उनको मार्गचित्र छ । २ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले यी क्षेत्रको समस्या गहिरिंदै गएको उनको बुझाइ छ । अहिले प्रतिनिधि चुनेर जनताले आफ्नो जिम्मेवारी निभाए भने उनीहरूलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने आफ्नो दायित्व भएको बताए । ‘अतिक्रमणको चपेटामा परेका ग्रामीण सडकको जीर्णोद्धार, नगरका सबै विद्यालयमा सर्वसुलभ र आधुनिक शिक्षा तथा सहज स्वास्थ्य सेवा अहिलेका लागि मैले गर्नुपर्ने काम हो,’ उनले योजना सुनाए, ‘त्यसका साथै मटिहानीको सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, सिँचाइ, व्यापार व्यवसाय र कृषि प्रणालीमा सुधार जस्ता कार्य पनि प्राथमिकतामा छन् ।’
मटिहानीलाई महोत्तरीको पत्रकारिताको उद्गमसमेत मानिन्छ । मण्डलको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि पत्रकारिता थियो । बुवा विन्देश्वरी र ठूल्दाजु रामकुमारसमेत पत्रकारितामा नै छन् । त्यसैले पनि जीवनको आधा बढी समय सञ्चार क्षेत्रमा व्यस्थित गरेका मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा पत्रकारिता विकासको समेत परिकल्पना गरेका छन् ।
नगरमा सूचना डेस्क स्थापना गरी सहज ढंगमा सूचना उपलब्ध गराउने र सञ्चार क्षेत्रलाई आवश्यक सबै सुविधा व्यवस्थापन गरी मटिहानीलाई पत्रकारमैत्री नगर बनाउने उनको परिकल्पना छ । ‘जहाँ सञ्चार त्यहाँ विकास,’ उनले भने, ‘यसलाई मूर्तरूप दिने प्रयास रहनेछ ।’
सल्मा खातुनको फड्को
छरितो ज्यान, काममा समर्पण र शान्त तथा भद्र शैली । ३० वर्षीया सञ्चारकर्मी सल्मा खातुनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने धेरैले उनको व्यक्तित्वको मूल्यांकन यसरी नै गर्छन् । १ महिनाअघिसम्म पनि उनी वीरगन्जको सामुदायिक एफएम नारायणीबाट श्रोताहरूलाई देश, विदेशका समाचार सुनाइरहेकी थिइन् । शनिबारबाट भने उनको परिचय फेरिएको छ । जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम मानिने पोखरिया नगरपालिकाको उपमेयर पदको जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले उनलाई उम्मेदवार बनाएपछि सुरुमा त पत्याउन गाह्रो भयो । अचानक आइलागेको यो चुनौतीलाई उनले अवसरका रूपमा लिइन् । १ महिनाको घरदैलो र सभा समारोहले उनलाई अन्तत: सफलताको स्वाद चखायो । रेडियोकर्मीका रूपमा श्रोताको मनमा बसिसकेकाले उनलाई परिचयको त्यति आवश्यकता पनि परेन । एक दशकदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेकी उनी पछिल्लो डेढ वर्षयता नारायणी एफएममा आबद्ध थिइन् । उपमेयर पदमा चुनाव लडने भएपछि रेडियो छाडिन् । बंगलादेशको ढाका युनिभर्सिटीबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण सल्माका पति अब्दुल गनी बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत छन् । स्वयं सल्मा पनि थोरै समयमा आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनले चकित छिन् । ‘अचानक मेरो जीवनको धार परिवर्तन भयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले कलमबाट आवाजविहीनहरूको प्रतिनिधित्व गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई दबाब दिइन्थ्यो, अब आफैं स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा बसेर जनताको सेवामा अहोरात्र खट्ने ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।’
माइती पोखरिया नै भएकाले पिछडिएको यो नगरपालिकालाई विकासको पथमा हिँडाउन आफूमा क्षमता र योग्यता रहेको उनको दाबी छ । ‘यो मेरा लागि ठूलो अवसर पनि हो, लामो समय मैले पत्रकारिताको माध्यमबाटै सामाजिक मुद्दाहरू उठाउँदै आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘पोखरियावासीले पनि परिवर्तन चाहेका रहेछन्, शिक्षित, सक्षम र सबल उम्मेदवारका रूपमा ममाथि ठूलो विश्वास र भरोसा गर्नुभयो, म उहाँहरूको विश्वासमा खरो उत्रने भरपूर कोसिस गर्नेछु, अब पिछडिएको नगर पोखरियाको सामाजिक र भौतिक विकास सँगसँगै गर्ने मेरो योजना छ ।’ मधेसी महिलाहरू पछाडि पर्नुको सामाजिक कारणको पहिचान गरी त्यसको निवारणमा लाग्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७४ ०७:३६
उम्मेदवार छान्दै दल
आश्विन ८, २०७४ अर्जुन राजवंशी
दमक — मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि झापाका प्रमुख दलका उम्मेदवार छनोटमा जुटेका छन् । जिल्ला नेतृत्वले आकांक्षीमध्येबाट चुनाव जित्न सक्ने उम्मेदवारबारे सर्वसम्मति जुटाउन छलफल तीव्र पारेका छन् ।
संघ र प्रदेशको चुनाव एकै पटक हुने भएकाले दललाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । स्थानीय चुनावमा अवसर नपाएकाहरूले आगामी चुनावमा स्थान खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र प्रतिनिधिभन्दा प्रदेशसभा चुनावका आकांक्षी धेरै छन् । दुवै दलले प्रतिनिधिसभाको सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामावली तयार पारिसकेका छन् । तर, अन्तिम निर्णय जुटाउन बाँकी रहेको ती दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ र प्रदेशसभाको लागि १० वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ । दुवै दलबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा पुराना तथा केन्द्रीय नेताहरूकै उम्मेदवारी पर्ने देखेपछि प्रदेशसभामा जिल्लास्तरीय नेताहरूको जाम लागेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मा, सुधीर सिवाकोटी, उद्धव थापा र देउमान थेबेको नाम अगाडि छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट केन्द्रीय सदस्य तथा लोकप्रिय युवा नेता भएकाले शर्मालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने सर्वसम्मतिजस्तै छ । २ मा सांसद सिवाकोटी र जिल्ला सभापति थापामध्ये एकलाई टिकट दिने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ३ मा नेता सिटौला नै उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ ।
४ मा सांसद कुमार बुढाथोकी र देउमान थेबेको चर्चा छ । बुढाथोकीले दोस्रो संविधानसभा चुनावका बेला प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा यस पटक थेबेले आफूले टिकट पाउनुपर्ने दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, बुढाथोकी सक्रिय राजनीतिमै रहेकाले उनको निर्णयले प्राथमिकता पाउने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वले क्षेत्र नं. ५ मा भने उम्मेदवार भेटिरहेको छैन । ५ नं. क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रका लागि सांसद महिन्द्राकुमारी सुब्बा र सुरेश सुब्बाको नाम छलफलमा आउने गरेको छ । सुरेश पहिलो संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका थिए । महिन्द्रा दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सांसद भएकी थिइन् ।
कांग्रेसले शर्मालाई प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित चुनावमा जाने चर्चा पनि छ । तर, शर्माले आफू प्रदेशसभामा भन्दा प्रतिनिधिसभामै लड्न चाहेको बताए । स्रोतका अनुसार शर्माले इच्छा नगरे कांग्रेस १ नं. प्रदेशमा भीष्मराज आङदेम्बेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने घोषणासहित चुनाव जानेछ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेभित्र पनि उम्मेदवारको नामावली लगभग तयार भइसकेको छ । एमालेले क्षेत्र नं. १ मा सांसद रविन कोइराला, २ मा सांसद प्रेम गिरी, ३ मा हरि राजवंशी वा वसन्त बानियाँ, ४ मा एसपी सावाँ र ५ नं. क्षेत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिरहेको छ । १ नं. का लागि उम्मेदवारको सूचीमा नाम राखे पनि उम्मेदवार बन्ने/नबन्ने रविन कोइरालाको निर्णयमा भर पर्ने एमाले स्रोतको भनाइ छ ।
स्थानीय तह चुनावमा मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरमा पार्टी पराजित भएपछि कोइरालासहितको एउटा समूहमाथि अन्तर्घात गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार कोइराला नभए महिलाबाट पवित्रा खरेललाई टिकट दिन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
२ मा सांसद गिरीसँगै एकराज कार्की र नरेश खरेलको नाम पनि चर्चामा छ । तर, पार्टी नेतृत्वले गिरीलाई नै टिकट दिने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । ३ नं. मा कांग्रेसबाट सिटौला उठ्ने भएपछि आदिवासी समुदायका राजवंशीलाई टिकट दिने गरी छलफल भइरहेको छ । उक्त क्षेत्र आदिवासी बहुल हो । बानियाँ उक्त क्षेत्रबाट दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका थिए । क्षेत्र नं. ४ मा पुन: सावाँलाई टिकट दिनुपर्ने गरी छलफल भइरहेको एक नेताले बताए । सावाँ दोस्रो संविधानसभा चुनावमा क्षेत्र नं. ५ मा कांग्रेसका कुमार बुढाथोकीसँग थोरै मतले पराजित भएका थिए । ५ नम्बर पार्टी अध्यक्ष ओलीको क्षेत्र भएकाले उनले इच्छा नगरेको खण्डमा मात्र अन्यले मौका पाउने पार्टी नेतृत्वले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि माओवादी केन्द्रले पनि एकखाले सूची तयार पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार क्षेत्र नं. १ मा हंसलाल राजवंशी, २ मा राजु आचार्य, पूर्णसिंह राजवंशी वा धर्मशीला चापागाईं, ४ मा झलकसिंह दर्लामी र ५ मा रेवतराज पुरी (गगन) लाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । हंसलाल स्थानीय तह निर्वाचनमा मेचीनगरको मेयर पदमा पराजित भएका थिए ।
पछिल्लो समय आचार्यको नाम विवादित मुद्दामा मुछिएकाले उनी नभए पूर्णसिंह या धर्मशीलामध्ये एकलाई टिकट दिन सकिने माओवादी स्रोतले जनाएको छ । ३ नं. मा भने सम्भावित नामहरू नै छानिसकिएका छैनन् । २ नं. मा व्यवस्थापन गर्न सके पूर्णसिंहलाई ३ नं. क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । ५ मा उम्मेदवार बन्न लागेका पुरी स्थानीय तह चुनावमा दमक नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार माओवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा एक्लै लड्ने या चुनावी तालमेल गरेर जाने भन्ने विषयलाई अहिले प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । केन्द्रमा बन्ने तालमेलकै आधारमा जिल्लामा प्रयास गर्ने उसको रणनीति छ । तालमेलबिना मंसिरको चुनावमा पनि माओवादीले जिल्लाभित्र सिट जित्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । स्रोतका अनुसार चुनावसम्म कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन कायमै रहे जिल्लाका १/२ क्षेत्रमा यी दुई दलबीच तालमेलको सम्भावना रहन्छ । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष ओली ५ नं. क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने त्यहाँ तालमेल गर्ने तयारी देखिन्छ ।